Soosaarayaasha qaabdhismeedka birta ah | Shiinaha Steel-qaabeeyayaasha bolt
Qalabka birta ah ayaa ku habboon saqafka iyo darbiyada derbiga ee injineernimada qaabdhismeedka birta. Toosinta guud ahaan waxaa loola jeedaa bir wareegsan oo isku xidha purlins steel, ie biraha adag ee birta ah, si kor loogu qaado xasilloonida purlins-ka oo looga dhigo purlins-ka mid u nugul xasillooni-darrada iyo dhaawaca xoogagga dibadda qaarkood. Waxaa jira xargo goos goos ah (yacni 45-digrii oo u laaban dunta xargaha) iyo xarigyo toosan (yacni gebi ahaanba waa toosan yahay). Kadib daaweynta galvanized kulul, saamaynta antirust ayaa la gaadhay.
Qalabka Torsional xiirista ee qaabeynta birta
Qalabka birta ah ee birta waa nooc ka mid ah xooga sare iyo nooc ka mid ah heerka caadiga ah. Qalabka birta birta waxaa badanaa loo isticmaalaa injineernimada qaabdhismeedka birta si loogu xiro dhibcaha isku xirnaanta taarikada qaabeynta birta. Qalabka birta ah ee birta loo qaybiyay waxay u kala qaybsan yihiin noocyo xiirid ah oo torsional ah iyo handarraabbadeedii xoogga weynaa ee laba geesoodka ahaa.
Ciddiyaha alxanka ayaa leh kuwa isku xira oo leh xoog iyo adkaansho. Ciddiyaha alxanka ayaa gaagaaban ciddiyaha alxanka madaxa silsilad u ah alxanka haraaga qaansoleyda. Ciddiyaha alxanka ayaa ah dhexroor magac u yaal ah Ф 10 ~ Ф 25 mm iyo wadarta dhererka ka hor inta aan alxamdu ka dhigin 40 ~ 300 mm. Qalabka Solder waxay leeyihiin calaamadda aqoonsiga soo-saaraha oo ka samaysan astaamo qulqulaya dusha sare ee madaxa. Jillooyinka isugeynta ayaa si ballaaran loo isticmaalaa.
Dhisme weyn oo lix geesle ah oo ka kooban qaab bir ah
Qalabka birta ah ee birta waa nooc ka mid ah xooga sare iyo nooc ka mid ah heerka caadiga ah. Qalabka birta birta waxaa badanaa loo isticmaalaa injineernimada qaabdhismeedka birta si loogu xiro dhibcaha isku xirnaanta taarikada qaabeynta birta. Boolal waaweyn oo laba-geesood leh oo xoog leh ayaa ka tirsan darajada sare ee boolal caadi ah. Madaxa laba-geesoodka ayaa ka weynaan doona. Qalabka weyn ee lixda-xagal leh wuxuu ka kooban yahay bool, lowska iyo laba makiinado dhaq. Guud ahaan 10.9.